कोरोना भाइरसको माहमारीमा के गर्दै छन् प्रदेश सरकार ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
कोरोना भाइरसको माहमारीमा के गर्दै छन् प्रदेश सरकार ?
२०७७ कार्तिक २२, शनिबार ०८:३०:००
कोरोना भाइरसको दर उ्रच्च गतिमा विकसित भइरहेको छ । केन्द्रसरकार राजनीति आन्तरिक विवादमा सुरुदेखि नै विवादमा छ । नेपाली जनता केन्द्रबाट प्रदेशतिर कुँदिरहेका छन । कोरोना कालमा तातो घामा दैनिक ज्यालामजुदुरी गरीखाने बर्ग केन्द्र हुदै गाउँपसे ।
घरघरमा सिंहदरबार भनिएको सघीयताको पहिलो अभ्यासमा रहेका हाम्रा लागि अहिले आएर नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन् । कोरोना माहामारीको प्रत्यक्ष अनुभव र जनताको पीडा के्रन्द्र सरकारले भन्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन। केन्द्र सरकारमा जतिको सेवा सुविधा अन्य प्रदेशमा छैन । तर पनि प्रदेश सरकारले सरकारलाई भनेर आवश्यक प्रवन्ध गर्न सक्थ्यो । तर प्रदेश सरकार अधिकार विहिन बनेर कोरोना भाइरसको समयमा लाचार प्रकट गरे । प्रस्तुत छः कोरोना भाइरसको समयमा कुन पदेशले कस्तो भूमिका खेले के के गर्र्दै छन
१. प्रदेश नं १
प्रदेश नं १ मा कोरोना भाइरसको दर पछिल्लो तुलनामा कम छ । सुरुमा हटस्पट बनेको गाइघाट, उदयपुरमा सप्तरीमा पछिल्लो समय नियन्त्रणमा आएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राइको सक्रियतामा यस कार्यलाई निकै उच्च महत्वको साथ हेरिएको बताउदै आएको छ । तथापी कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइसेकको भने छैन । सुरुमा केन्द्र्र सरकारले अधिकार नै नदिएका आफूहरु पछि परेको प्रदेश सरकारको भनाई रहेको छ । तर भारतीय सिमामा नजिक रहेको यस प्रदेशमा पछिल्लो समय लकडाउन हटेसँगै कोरोनाका विरामी बढेको छ । आइसियु्को अभाव भएका छन् । केन्द्रसरकारले जति गर्नुपथ्र्यो त्यति नगरेकोभन्दै आलोचना हुदै आएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश न्रं २ सरकार नराम्ररी चु्केको छ । कोरोना परिक्षण गर्ने कालमा पनि पिसिआर मेसिन खरिद गर्न नसकेको र मेसिन चलाउन सक्नेदक्ष जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै यस प्रदेश सरकार चुकेको थियो । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा पनि केन्द्रसरकारले बजेट नपठाएको आरोप लगाउदै यस सरकार कानमा तेल हालेर बसेको थियो। कोरोना कारण अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश न २मा क्षति भएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल रहेको यस प्रदेशमा केन्द्र सरकार पनि पर्छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण यस प्रदेश नराम्री चुकेको छ । कोरोना भाइरसको दर उच्च गतिमा बढीरहँदा कोरोना नियन्त्रणभन्दा पनि अन्यअन्य कुरामा बढी केन्द्रित हुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर गएको छ । काठमाडौं लगायत जिल्लाहरुमा कोरोना नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कोरोना नियन्त्रण हुननसक्दा प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्ने लक्षण देखिएको छैन। कोरोना कालमा नेपाली जनतालाइ चिउराको भरमा हिड्न बाध्य हुँदा सम्म पनि कुनै कार्य गर्न नसकेको कोरोना संक्रमण पनिबढी रहेको छ ।
हाल यो प्रदेश कोरोना नियन्त्रण उन्मुख देखिएको बताउदै आएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर फैलिनबाट सुरुमै परिक्षण आइसोलेसनका सहि व्यवस्थापनबाट सम्भवा भएको बताइएको छ । यस सरकारले के्रन्द्रको भन्दा पनि आफैले नियन्त्रणगरी गाउँकै स्वयम्सेवक मार्फत कोरोना नियन्त्रण उन्मुख रहेको छ । केन्द्रले भन्दा पनि राम्रो काम गरेको उदाहरण दिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कोरोना भाइरस काठमाडौंको तुलनामा कम रहेको छ । यस सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मार्फत बेरोजगारलाई भत्तादेखि अन्य सेवा सुविधा समेत दिदै आएको छ । यहाँका जनता रोजगाररीका लागिभारत जान बाध्य छन । तर प्रदेश सरकार कुनै ठोस कदम नगर्दा यहाँका जनता कोरोना कालमा पनि अन्य मुलु्क छिर्दा मुख्यमन्त्री केन्द्रको विवादतर्फ बढी केन्द्रित हुन्छन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा दैनिक ज्यालगरी विशेषगरी भारतमा रोजगार गर्न जानेको संख्या बढीरहेको छ । कोरोना भाइरस सुरुमा लकडाउनमा समय उचित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रदेशको तिब्र आलोचना भएको थियो । अहिले भने यस प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण उन्मुख रहेको बताइएको छ । अन्य सरकारले शूल्क लियर कोरोना परीक्षण गरिहरेको समयम यस प्रदेशले भने नि शूल्क जनताको उपचार गरिरहेको छ ।